Hevi-petsy no ataon’ Ambohitsirohitra : halatra omena alalana – MyDago.com aime Madagascar
Aza misalasala intsony fa tsy ho ela dia hitsena ny filoha Ravalomanana isika hoy ny kabarin’ny Ben’ny tanana Guy Maxime Ralaiseheno tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany. »Any amin’ny filoha Ravalomanana ny lakile sy ny vahaolana » hoy izy.Nanamafy ihany koa ity mpanao politika tanora ity fa tsy hahazo fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy ny FAT raha tsy tafaverina an-tanindrazana ny filoha roa lahy dia ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Ravalomanana.
Raha nandray fitenenana kosa ny solombavambahoaka voafidy tany Vavantenina, Zafilahy Stanislas, dia nilaza fa ny fiarovan-tena tsara indrindra dia ny mitsoaka , io no tetika tokona horaisina ny FAT ankehitriny. Ohatra amin’izany hoy izy ny famarotana tsy misy tolo-bidy ny tahirin’ny andramena , « halatra omena alalana » tokoa izany hoy izy, fihetsiketsehana no betsaka fa ny tsy fisin’ny vola no fototr’io teti-dratsy io a. Mihamafy koa ny rivotra politika eto toerana ka dia miova ny resaky ny mpanao politika satria dia mahatsapa ireo fa soavaly be tongotra i Andry, tsy afaka intsony ary malalaka noho izany ny lalan’i Ravalomanana. Eo no tokony ho mailo ny vahoaka.
Hevi-petsy no ataon’ Ambohitsirohitra hoy izy, noraisin’i Andry Rajoelina tsirairay ny antoko amin’izay izy tenany ihany no mahalala ny resaka nataony fa tsy atao tahaka ny tany Ivato.
Nolazaina fa tsy nisy zavatra vita mihitsy tao anatiny ny 50 taona, sao kosa dia ity no tetezamita ratsy indrindra ? Ary Rajoelina dia tafiditra amin’ny raharaha rehetra ka dia hanangana « haute cour de justice », hono, na i Andry Rajoelina te hanadio tena hoe sahy satria tsy nanao ratsy na mahatsapa fa tsy mety ny fitsarana ; Ireo roa ireo dia milaza fa tsy hisy io HCJ io.
Tsy matotra io fifidianana kasain’ny FAT hatao io hoy i Zafilahy satria ilay fifidianana 17 novambra no « reference « ary feno « doublons » ny lisitra.Raha dinihina ihany koa hoy izy ny votoatin’io fitsapa-kevibahoaka ny 17 novambra io , artikla 154, dia milaza fa ny lehiben’ny distrika dia latsa-bato mivantana kanefa ny fifidianana kasaina hatao izao dia tsy izay voalaza tao io mihitsy.Aleo mitsotra fa tsy voanareo ny mitondra firenena hoy i Zafilahy Stanislas.
« Hafàna ny rivotra paolitika » fa tsy « fahatoniana ara paolitika »
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 août 2011 9 août 2011 Catégories Politique
3 réflexions sur « Hevi-petsy no ataon’ Ambohitsirohitra : halatra omena alalana »
Misaotra Zafilahy a!soa fa teo ianao hanazava izany rehetra izany fa efa be loatra ilay
FAFY LAINGA sy FAMAHANAN-DALITRA hataon’i domelina sy ny foza orana ka mila
tsy ho araka intsony indraindray.
Ny mampalahelo eto dia raha vao mba misy hadisoana kely Zafilahy dia avy2 ery ny sasany manan-kiana fa tsy
mba manampy na manitsy mora2 fa( izao no izy )na mba mba AHITSY KELY ilay tsikera fa MIVANTANA loatra,
ataoko fa mba mendrika fanajana io lehilahy io !mpitolona MAHERIFO toa an’i ZAFILAHY izany no tsy ampy ao
@ tanana, eo ihany koa ny finoana hananany izay ho entiny @ mpitolona eo isanandro.
10 août 2011 à 11 h 31 min
Etat voyou: la HAT confisque les biens de la population malagasy
Lire l’article sur le pillage de la région Vakinankatra
10 août 2011 à 13 h 48 min
Merci de nous tenir informés, Rabetiko.
Précédent Article précédent : Guy Maxime : « tsy misy fankatoavana iraisam-pirenena raha tsy tonga Ravalomanana, any amin’i Dada ny lakile »
Suivant Article suivant : Des caisses vides à renflouer à l’approche des élections unilatérales ?